Shaqooyinka Dubai ee Hindiya - Ogoow sida aad u heli karto Shaqada Dibadda ee 🥇
Soo Gudbi Sawirkaaga*
Xirfadaha & Aqoonta
Shaqooyinka Dubai ee Hindida - Soo ogow sida aad ku heli karto!
Koonfur Afrika Shaqooyinka Dubai
Qurba jooga qurbaha ah - Hada waxaan ku shaqaaleysaneynaa UAE
Shaqooyinka Dubai ee India
Shaqooyinka Dubai loogu talagalay Hindida ayaan hada nahay qorista dhawr qaybood oo talo ah adiga mawduucaas. Xaqiiq ahaan, Hindida ayaa hadda ku dhow 60% dadweynaha UAE. Shirkadda Dubai City hadda caawinta shaqo doonka ee Bariga Dhexe. Dhanka kale, haddii aad kudhisan tahay India waxaad ka dalban kartaa howlaheena. Isla mar ahaantaana, waxaa lagu meelayn karaa Bariga Dhexe. Sababtaas awgeed, shirkaddeenna waxay qado u qabataa adeegyo khaas ah oo loogu talagalay duullimaadyada.
Waxaan hadda ka qoreyneynaa qulqulka kuwa India. Waa in lagu xasuustaa taas dadka ka yimid India ayaa ah kuwa ugu wanaagsan ganacsiga. Gaar ahaan waaxaha dhaqaalaha, Hindida ayaa si fiican loogu yaqaanaa Gulf job. Dhinaca dhinaca wanaagsan ee ka soo jeeda Hindiya ilaa wadan cusub sida UAE. Iyadoo lagu saleynayo dib u eegista Asaasiyadaha Asia waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan. Xaaladahaas weligood qof walbaa wuxuu noqon karaa socod gooni ah wareysiga Bariga Dhexe. Dabcan, waad heli kartaa shaqo haddii aad taqaanno dadka saxda ah ee ay wax ka qaban karaan.
Doorashada shirkad caalami ah oo caalami ah waa in si dhab ah loo qaato. Tallaabooyin kasta oo aad qaadato waxay noqon kartaa doorasho khalad ah waxayna noqon kartaa musiibo. Ma doonayo inaad bilowdo xiiso u leh Dubai City shaqo iyo nolol qaali ah. Iyada oo leh dabeecad qaldan iyo culeys iyo go'aanno aan loo baahnayn. Guud ahaan marka la hadlayo, waad u baahan tahay inaad aad uga taxadarto go'aamadaada dib u dejinta.
Shaqada Bariga Dhexe
Si aad u hesho shaqo bixiyayaasha Bariga Dhexe waxaad u baahan tahay inaad ogaato heshiiska. Marka hore, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida loo cirib tirayo CV-gaaga si ay u shaqaaleeyaan maamulayaasha. Markaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato warshadaha aad ka bilaabi karto shaqo dalka Imaaraadka Carabta. Xulashada ugufiican ee aad ubaahantahay in loo raro Qatar ama Kuweyt. Intaas waxaa sii dheer ilaa intee ayey qaadan doontaa in shaqo ka raadso Dubai ama Abu Dhabi. Ama xataa shirkadaha ay shaqaaleysiisay Sacuudi Carabiya. Iyadoo maskaxda lagu hayo, waa inaad heshaa aqoon dheeraad ah oo ku saabsan Bariga Dhexe.
Bariga Dhexe ayaa si fiican loo yaqaan Shaqooyinka Hotel ee Dubai. Xaaladahan oo kale, waa inaad si dhab ah u ogaaneysaa sida shirkadeenu kuu caawin karto si aad shaqada ugu degto. Tusaale ahaan, shirkadkayaga oo shaqo-bixiyayaasha caalamiga ah ee caalamiga ah ee shirkadaha UAE. Shaqooyinka Dubai are wide open for new shaqaale doonaya Dubai iyo Abu Dhabi. For this reason, the Dubai has wuxuu bilaabay mashruuca 'expo 2020'.
Helitaanka shaqo ku habboon daahitaan la'aan ayaa laga heli karaa Bogagga shaqooyinka isku xidhka. Isla mar ahaantaana, waxaad lahadli kartaa maamuleyaasha kale iyo shaqo doonka ee iyagana ah raadinta shaqooyinka riyada sidaad doonaysid. Shirkadeena sidoo kale waxay sameysay baaritaan qoto dheer shaqo kasto oo ku yaal UAE. Waad awoodaa hel shirkadaha shaqaaleynta iyo dekadaha shaqada iyadoo la raacayo tilmaameheena faahfaahsan. Dhanka kale fadlan fadlan sidoo kale fiiri muuqaal ahaan iyo isbeddellada Bariga Dhexe loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee hoose.
How to find Hay'adaha shaqaalaynta ee Dubai Hindida?
Qaar ka mid ah qorayaasha caalamiga ah ee ka yimid India ayaa bixiya xal hal-joojin ah. Inta badan, habka qorista waa muddo dheer. Sida kor ku xusan, waa inaad isku daydaa inaad degto gurigaaga cusub dibadda. Dabcan, Abu Dhabi iyo Dubai waa meesha ugu fiican ee loogu talagalay shaqada. Sida la ogsoon yahay in goobaha kale ee shaqadu ay waliba bixin karaan adeegyada lagama maarmaanka ah. Sababtaas awgeed, waxaa lagugula talinayaa in la helo shaqo dhammaystiran ka hor inta aadan u guurin UAE.
Waqtigaan yar oo ka mid ah shaqaalaha qorista adeega kuwaas oo ay ka mid yihiin shaqada gacanta ee UAE. Waxaad awoodi kartaa shaqo raadin dibada waajibaadka aasaasiga ah. Tusaale ahaan xirxirida, rarida, dejinta iyo soo dejinta Noocyada shaqooyinka waa la heli karaa. Waqti ka waqti, shaqooyinka noocan ah ee Dubai waxay u ekaan karaan howlo fudud loogu talagalay dadka ajnabiga ah. But just to find employment they are more than OK. But can be overwhelming for best recruitment agencies in Dubai.
Waxa kale oo jira kharash dheeraad ah markaad shaqo raadinayso UAE. Xaaladahaas oo kale, wakiilada shaqaaleynta dhab ahaantii waa shaqo-dooneyaal Hindi jecel. Waqti dheer, wakiilada shaqaaleysiinta qaar waxaa laga yaabaa inaysan daboolayn xirmada oo dhan. Guud ahaan ka hadal, caymis haddii aan la buuxin markaad u guurto Dubai. Ha ilaawin inaad eegto Ganacsiga shaqaalaynta Gulf gacanka. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Hay'adaha shaqada ee Dubai - sida loo helo?
Shirkadaha guud ahaan iyo hay'adaha shaqada ee UAE. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad si toos ah u eegto Dawlad Gacanka. Waqtigan xaadirka ah, Shaqooyinka Emirates ee shaqo doonka weli way fududahay in la helo. Sidaas darteed hay'adaha shaqada ee Emirates ayaa loo isticmaali karaa Shaqo wanaagsan oo baadhitaan ku sameeya Dubai ee shaqaalaha Indianka.
Dhanka togan, shaqo doonka Hindiya way awoodaan shaqo ka bilow loo shaqeeyaha tooska ah. Haddii aad raadineyso shaqo waqti dheer la hadal maamulaha shaqaaleynta ee UAE. Tusaale ahaan, ganacsiga shaqaalaysiinta shaqaale waa tan ugu weyn isha dakhli ee dhowr shirkadood oo Imaaraad ah. Dhanka kale, waxaa jira dhowr shirkadood oo kale oo shaqaaleysanaya. Tusaale ahaan, wakaaladaha shaqada ee South Africa Shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay qurba-joogta way ku caawin kartaa.
Markaad raadineyso hey'adaha shaqaaleysiinta ee wanaagsan waxay eegayaan dib u eegista. Waxaa jira shirkado badan oo aan haysanin Emirates. Waa runtii u qalantaa in la qaato muuqaalka qoto dheer. Ganacsiga Google waa meel fiican oo lagu hubiyo dib u eegista shirkad kasta. Sidoo kale, iskuday inaad ka soo ururiso macluumaad dheeraad ah meelaha ka baxsan. Tusaale ahaan, waxaad ku eegi kartaa annaga Tilmaamaha loogu talo galay shaqo doonka khaliijka. Isku day inaad la hadashid dad kale oo shaqo doon ah. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dhismaha iyo degaanka hadda jira bannaanbaxyada iyo shaqooyinka Dubai. Dhab ahaantii, tani waa fikir fikrad ah.
Mid ka mid ah kuwa ugu fiican fursadaha shaqo ee aad ka heli karto UAE. Dhab ahaantii, ka soo shaqo-bixiyayaasha iyo shirkadaha. Waqti xaadirkaan, bangiyada ayaa ah kuwa ugu shaqeeyaa Dubai iyo Abu Dhabi. Sidaas darteed ha u daadin oo ha raadin hay'adaha shaqada ee bangiyada Dubai.
Sida loo doorto wakaaladaha shaqo ee ugu wanaagsan Dubai
Qaar ka mid ah goobaha raadinta xirfadaha ee 2018 waxay leeyihiin sharciyo ka adag kuwa kale. Falanqeynta raadinta meesha ugu fiican ee lagu noolaado inta badan taleefanka gacanta. Ilaa iyo inta alaabada dib loo riixayo waa arrin khuseysa. Qoysku waa muhiim marka aad raadineyso shaqo. Sidaas markaad go'aansato inaad u soo guurto Dubai. Ka hel macluumaad qaar ka mid ah xubnaha qoyska. Waxay rabaan uun inay kuu fiicnaadaan. Qaarna dhab ahaantii way awoodaan kaa caawin doona inaad shaqo ka hesho Bariga Dhexe.
Dhanka kale, dadka qaar baa arki kara sida wanaagsan ee aad ushaqeyso Dubai. Sidoo kale, qaar ka mid ah waddammada ayaa ka mamnuuceysa ama u baahan dukumiinti dheeraad ah oo loogu talagalay xawaareyaasha. Hubso inaad ku keento dukumiintiyada qaarkood dhulalkooda. Dubai, tusaale ahaan, wuxuu mamnuucayaa ashyaa'da aan maamulin qiyamka diinta iyo akhlaaqda. Sidoo kale shirkadaha qaar ayaa leh xeerar u gaar ah. Tusaale ahaan shirkadaha baabuurta ee UAE. Haddii aad bilowdo inaad la shaqayso noocyada shaqo-bixiyaha waxaad u baahan tahay inaad wax badan ka ogaato UAE.
Shaqooyinka Dubai ee loogu talogalay Hindisaha
Shirkadda Dubai City waxay kuu maareyn kartaa adiga!
Wakaaladaha shaqaaleynta ugu fiican ee aad ka heli karto oo keliya Google iyo Bing. Xilligan ugu sareysa ayaa qiimeeyay shirkadaha ay la shaqeeyaan waa blockchain. U dirista dalabka shaqaaleysiinta. Kuwa ay ka qoranayaan kuwa raadinaya musharixiinta. Ka dibna dirista resume tusaalooyin maamulayaasha HR wakiilada shirkada. Dhamaadka in laguugu yeedhay waraysi. Hab fudud laakiin waxtar u leh Abu Dhabi iyo Dubai.
Shaqada Dubai iyo kharashka u guurista UAE
Qiimaha guuritaanka caalamiga ah adeegyadu waxay ku badan yihiin shaqooyinka magaalada Dubai ee Hindida. Xitaa shandadaha fudud ee diyaaradda waxay ku kacdaa kharashkiisa weyn. Qiimaha ugu horeeya wuxuu kuxiran yahay masaafada uu tagayo. Waana in lagu xasuustaa taas waxaad u guuri doontaa Dubai. Qiimaha gaadiidka iyo mugga walxaha la rarayo. Waxaa laga yaabaa in toban aad u sareysa ay ka iibsato waxyaabo cusub oo ku yaal Emirates. Waxaad bilaabi kartaa xoogaa aasaas ah barashada shaqada ee UAE haddii aad ku fiican tahay luqada Ingiriiska.
Waxa kale oo laga yaabaa inaad tixgeli sida shaqaalahaaga loo geyn doono UAE. Sida socdaal cusub, waxaad leedahay dhowr ikhtiyaar oo loogu talagalay hawo, dhul ama biyo dhammaantood waxay ka yimaadaan Hindiya. Waqtiga intiisa badan, dadku waxay u guuraan meel ka baxsan UK, Saudi Arabia, iyo kuwa ugu caansan shaqaalaha ka Filibiin iyadoo Qatar la geeyay UAE. Khudaarta Bariga Dhexe waxa ay alaabtooda ku safri jireen konteenarada jaban ee badda. In kabadan 70% dadka shaqo doonka ah waxay shaqooyinka ka raadsadaan Dubai iyagoo baaraya darawalada uber. Hubso inaad taqaanid waxa aad samayn doontid marka ku xigta meelaynta shaqo.
Si aad u ogaato qiyaasta qiimahaaga xamuul xamuul ah oo loo diro UAE. Fadlan eeg jadwalka caadiga ah ee ka saarista meelaha loogu jecel yahay adduunka oo dhan. Waxaad ka heli kartaa Google. Hubso inaad ku dari doonto hal miisaan oo amar kasta ah. Sidookale hadaad tahay u guuritaanka Pakistan si Dubai waxay noqon kartaa mid ka qaalisan inta aad ka fekereyso.
Halkee laga helaa fursadaha ugu dambeeyay ee Dubai?
Si aad uga shaqeyso Dubai runtii waxaad ubaahantahay inaad raadsato shaqaale kufilan deegaankaaga. Dhinaca taban, badiyaa Shaqooyinka Dubai oo leh fiiso hore ayaa loo qaadan karaa. Sare u qaad iyo cilmi baaris qoto dheer oo loogu talagalay nolosha riyada ee Dubai. Qaar ka mid ah shaqooyinka loojistikada ee Dubai iyo shaqooyinka banaan la imow baakadaha dejinta. Sidaas awgeed waxaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo dhab ah oo la qaato, gaar ahaan haddii gunnada lagu daro mushaharka. Shaqooyinka Dubai ee ajaanibta leh MBA waa mawduuca ugu muhiimsan ee qurbajooga. Mid ka mid ah su'aalahan ayaa ah sida loo helo fursado shaqo oo cusub oo ku yaala Emirates.
Shaqooyinka ugu dambeeyay ee Dubai waxaad ka heli kartaa bogga internetka xayeysiiska ee xayeysiiska ah. Shaqada Dubai waa shaqo adag iyo inaad si sax ah u sameyso waxaad u baahan tahay inaad diiradda saarto. Iskuday inaad hoos u dhigto waxyaabaha aad rajeynayso. Qaar ka mid ah shaqooyinka maareeyayaasha dukaannada ama xitaa kormeeraha hoose ee bakhaarka waxay noqon kartaa bilow fiican. Hubso in shaqooyinka Dubai ee Hindida ay tahay mowduuca ugu weyn ee adiga baarista blog-ga iyo warbaahinta bulshada.
Xilligan la joogo Bariga Dhexe ayaa sidoo kale shaqaaleysiiya dumarka ajaanibta ah sidaas darteed haddii aad tahay haween. Waxaadna raadineysaa shaqada UAE ayaa kuu furan. Xitaa Sacuudi Carabiya iyo Qadar waxay hadda shaqaaleysiiyaan haweeney u tartameysa. Tusaale ahaan hoteelada iyo shirkadaha suuq-geynta shaqaalaynta Abu Dhabi.
Shaqooyinka Dubai ee loogu talagalay qurba-joogta Hindida Hindida ah
Inta badan tababarayaasha shaqaalaynta Dubai ee helaya agagaarka 300 ayaa maalin kasta dib u bilaaba. Maalmahan si ay u helaan shaqo furan oo cusub oo ka furan Dubai ama Abu Dhabi waxaad u baahan tahay inaad si aad ah u shaqeyso. Qaar ka mid ah dalal diblomaasiyadeed ayaa leh hab sahlan oo lagu helo shaqo. Mid ka mid ah tusaalooyinka Maraykanka iyo Ingiriiska. Tusaale ahaan Shaqooyinka Dubai ee Hindida Hindida ah aad u furan. Dadka ka yimid Boqortooyada Midowday oo leh aqoon waxbarasho Dusha sare, hay'adaha shaqaalaysiinta ayaa diraya dadka Switzerland ka socda ilaa Dubai.
Dibad-baxayaasha Ingiriiska ayaa sidoo kale helaya maareynta maareynta. Markaad joojiso shirkadaha ugu sareeya ee 100 Imaaraadka Carabta. Waxaad si sahal ah uga heli kartaa agaasimayaasha ka soo jeeda Great Britain oo ah maareyn aad u weyn. Sidaas marka maamulayaasha UK ay dalbanayaan a Shaqooyinka banaan ayaa sidoo kale ku jira kooxaha shaqooyinka WhatsApp. Waxaa jira fursad sare oo ah maamule kale oo khibrad u leh London inuu eego CV-gaas. Tani wax xun maahan, dabcan, waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad nolol cusub ku hesho Dubai.
Shaqooyinka Dubai ee India. Shirkadeena ayaa kuu maamusha!
Magaalada ugu fiican ee shaqeyneysa iyo sida loo helo hay'adaha shaqada ee Dubai?
Hay'adaha shaqada ee Dubai, Abu Dhabi iyo Doha. Magaaladan oo dhami waxay ku fiican yihiin raadinta xirfadaha. Haddii aad raadineyso inaad hesho xirfad caalami ah adiga waa in laga fikiraa Bariga Dhexe. Shaqooyinka Dubai loogu talagalay Hindi ma ahan run. The Xirfadaha Bariga Dhexe waxaa loogu talagalay qof kasta oo u soo guuray. Mid ka mid ah meelaha ugu fudud ee laga helo shaqo ee Abu Dhabi.
Waxa jira in badan oo ka mid ah hay'adaha xoojinta magaalada Dubai marka loo eego Abu Dhabi ama Qadar. Waqtigan xaadirka ah dadku waxay ka raadinayaan Shaqooyin Dubai ku yaal oo Hindi ah. Markaa Raadi tilmaamaha iyo macluumaadka habboon marka hore hubi inaad taqaanid halkaad aadeyso. Aynu ka bilowno Doha, magaaladan oo qaadata ku dhawaad ​​dhammaan Dadweynaha Qatari. Laakiin dhinaca kale waa meesha ugu adag ee loo guuriyo. Inta badan dadka ajnabiga ah ee raadinaya Xirfad-jimicsiga UAE looma qalo. Waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad leedahay a qorshaha wanaagsan ee xirfad-raadintaada.
Sida loo find job agencies for Hindida Hindiya?
Waxaa jira siyaabo dhowr ah oo loo sameeyo. Mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee loo-shaqeeyaha loo helo ayaa ah ku biir kooxaha shaqooyinka. Tani waa hab caqli leh oo lagaaga helo shaqo-bixiyeyaasha gurigaaga. Guud ahaan hadalka si aad shaqo uga hesho Dubai. Xaqiiqdii, waxaad u baahan tahay inaad qorshe ku jirto gacantaada. Waxaad u baahan tahay inaad haysato macluumaad badan oo ku saabsan qaab dhismeedka shaqo ee UAE. Sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo waa in sida loo helo shaqo Tilmaamaha Dubai ee loogu talagalay qurba-joogta. Ka hor inta aanad u guurin UAE. Waxaad u baahan tahay inaad haysato wax kasta oo meel ah si aanad u daboolin lacagtaada.
Marka si loo soo afjaro taas, waxaad ka heli kartaa dhowr macluumaad wanaagsan khadka tooska ah. Dhanka taban, waxay hubaal qaadan doontaa wakhtigaaga. Kaliya waa in laga helaa shaqo bixiye UAE caadiyan qaadataa illaa lix bilood illaa sannad. Marka iska hubi inaad sidaas samayn doontid kaalay dalkeena oo si buuxda u diyaarsan. Shaqooyinka Dubai ee Hindida - Waxaan hadda gacan ka geysaneynaa sidii aan shaqo ku heli lahayn Dubai iyo Abu Dhabi. Waad awoodaa ka hel fursadahaas riyada riyada ah ee UAE.
Shaqooyinka Dubai ee Hindida iyo shaqo raadinta UAE!
Waxaan hadda ka caawineynaa helitaanka shaqooyinka Dubai iyo Abu Dhabi
Soo hel a Shaqada Dubai la yaab leh waxaad ka heli kartaa nolosha riyadaas.
Isku day inaad dib u dirto resume iyo bilaabi a shaqo cusub Dubai!
Resume Resume oo ah magaalada ugu sarreysa ee aduunka! - Shirkadda Dubai City Careerjet Dubai waa hogaaminta moobiilka shaqo raadinta
Shirkadeena hadda iyagoo siinaya hagitaan wanaagsan oo ku nool Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Dubia way soo baxday. Sidaa daraadeed, arrintaan maskaxda ku haysa, waxaad hadda heli kartaa hage, talooyin iyo shaqo ku qoran Imaaraadka Imaaraadka Carabta adoo luuqaddaada ku hadlaya.